Dr. Tint Swe's Writings: January 2017
ယူကေနိုင်ငံမှာ လူပေါင်း ၆ သိန်း၊ ၂ သောင်းတို့ဟာ နှလုံးမျိုးဗီဇအမှားကြောင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ အလားအလာရှိလို့ ရုတ်ရက်သေဆုံးနိုင်မလား စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ တနာရီက သတင်းထွက်ပါတယ်။ လူအားလုံးသာစစ်ဆေးရရင် အဲဒီအရေအတွက်ဟာ လူပေါင်း တသိန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုဆိုတာ DNA blood test စမ်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဗီဇကို familial hypercholesterolaemia (FH) လို့ ခေါ်တယ်။ သူတို့မှာ ဆိုးတဲ့ ကိုလက်စထောခေါ် LDL အဆီဓါတ်များနေကြတယ်။
အဲလိုအားနည်းချက်ရှိတဲ့မျိုးရိုးအရမွေးလာတဲ့ကလေးတယောက်ကနေ မျိုးဆက်ဆက်လက်သယ်ဆောင်ဘို့ ၅ဝ% ဖြစ်နိုင်တယ်။
မနှစ်က ဒီနေ့မှာ ကိုတရုပ်ကြီး (ခေါ်) ကိုမြင့်တိုးနဲ့ မစူးတို့အိမ်မှာ ဧည့်သည်လုပ်၊ လက်ဖက်သုပ်စားခဲ့ပါတယ်။ အဲတာက ကရင်နဲ့ မွန်အိမ်က ကလေးမွေးနေ့မှာ ထမင်းစားခဲ့ပြီးအပြန်မှာပါ။
အိမ်မပြန်ခင် မွန်စတိုးဆိုင်မှာ ဈေးဝင်ဝယ်ပါတယ်။ ဆိုင်ရှင် မွန်အမျိုးသားက စိတ်ဝင်စားလို့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ မေးတယ်။ သူက မြန်မာပြည်မှာ NLD အစိုးရတက်မှာမို့ တိုင်းပြည်အတွက် အားတက်စရာလို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုတရုပ်ကြီးလို့ခေါ်ပေမယ့် သူကဗမာ။ အခေါ်အဝေါ်တွေကို နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ခေတ်မှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါနောက်မှာ ဘာလို့ ဆက်နေရသေးတာ။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်ကတော့ ပညာဘွဲ့ကိုသာ ထည့်တယ်။ အဲတာလည်း အမြီးတိုတယ် ရှည်တယ် ခေါ်ကြတယ်။ ခုခေတ်မှာက အမြီးကုပ်သလား ထောင်သလား။
Photo by Nay Mya Mya Swe
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို ပြောရတာ အတော်ကြီးကို သတိထားရတယ်။ အဲလို အထိမခံရွှေပန်းကန်ဖြစ်နေတာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာာမဟုတ်ပါ။ ကွဲလွယ်ရှလွယ်တဲ့အရာဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ အသုံးမကျပါ။
အပြောမခံရတိုင်းတော့ အဟုတ်မှတ်မနေနဲ့။ တခါတခါ မျက်နှာသာပေး ရွှေရေးပန်းကန်တက်၊ ခက်တယ်ဗျာ။
ဆရာခင်ဗျာ့ ကျနော်အသက်က ၂၇ နှစ်ပါ။ ကျနော် ဆီးအောင့်နေလို့ပါ။ ကျနော်အသက် ၂၃ လောက်က ဆီးကျောက် တည်ဖူးပါတယ်။ ကုသလိုက်လို့ပျောက်သွားပြီးသားပါ။ ခုပြန်ပေါ်နေလို့ ဆေးနည်းလမ်းညွှန်ပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
Urethritis and Cervicitis caused by Chlamydia (ကလာမိုင်ဒီယား) ကြောင့်ဖြစ်သော သားအိမ်အဝ-ဆီးပြွန်အဝ ရောင်ခြင်း
Acute Pylonephritis ကျောက်ကပ်ပြွန် ရက်တိုရောင်ခြင်း၊
• Trimethoprim-Sulpfamethoxazole 160/800 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂၁ ရက်။
Acute Cystitis and Acute Prostatitis ရက်တို ကျား-မ ဆီးလမ်း၊ ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ကျား-ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း၊
• Trimethoprim-Sulfamethoxazole 160/800 mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်သောက်ပါ။
Chronic Prostatitis နာတာရှည် ဆီးလမ်း၊ ကျား-ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း
Urethritis ဆီးလမ်းပြွန်အဝ ရောင်ခြင်း
Acute Interstitial Nephritis (Penicillins, Cephalosporins, Sulfonamides, NSAIDs, Rifampin, Phenytoin, Allopurinol) ဆေးများကြောင့် ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းများ
မက်ဂနီဆီယမ်ဟာ စတုတ္ထအများဆုံးဓါတ်ဆားဖြစ်တယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပရိုဆင်းဓါတ်နဲ့တွဲရှိနေတဲ့ မက်ဂနီဆီယမ် ဓါတ်ဆား စုစုပေါင်း ၃၇၅ဝ ရှိတယ်။ အင်ဇိုင်းမ်ပေါင်း ၃ဝဝ မှာ သူပါမှဖြစ်တယ်။ နည်းနေတာ မကောင်းဘူး။ မက်ဂနီဆီယမ် နည်းရင်ဘာဖြစ်သလဲနဲ့ မက်ဂနီဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကို ရေးပါမယ်။
8. Irregular Heartbeat နှလုံးခုန်မူမမှန်ဖြစ်မယ်။
သုတေသနက တခြားတိုင်းပြည်မှာဖြစ်လို့ သူတို့ဆီကအစားအစာတွေသာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာစားကြတဲ့ ဖွဲနုနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆီကအစ၊ သွားရည်စာ၊ အစေ့အဆီမျိုးစုံ၊ ဟင်းနုနွယ်လိုအရွက်အရွက်တွေမှာ မက်ဂနီဆီယမ်ဓါတ် ပါပါမယ်။
ကျွန်တော့်ပို့စ် အသည်းခြောက်ရောဂါမှာ အရက်သောက်သူတွေကို သတိပေးအပ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူရဲ့ဘေး ၆ ပေပတ်လည်ရှိနေသူတွေကိုပါ ရောဂါရစေတယ်။ အရက်ကတော့ သောက်တဲ့သူသာမက မိသားစုနဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကိုပါ ဒုက္ခအကြီးအကျယ် ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆေးပညာစာတွေရေးရင် ခြောက်လှန့်ချဲ့ မရေးပါ။ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေ မကြာခဏလာတယ်လို့ နိဒါန်ပျိုးခဲ့တယ်။
ကွန်မင့်တခု = Ye Min လူမုန်းနေတဲ့ လူမမာကိုကယ်တင်ဖို့ လူသားစိတ်မွေးပေးဖို့ အင်အားဘယ်မှာရှိနိုင်မှာလဲ :'(
Tint Swe ဆရာဝန်တွေက အဲလိုတော့ သဘောမပိုက်ရပါ။
Ye Min သွေဖီသွားပါတယ်ဆရာ။ မိသားစုဝင်တွေက စိတ်နာလို့ပြစ်ထားတယ်ဆရာ။
အဲတာ အလွန်မှန်တယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ အရက်စာတွေကို အရက်သောက်သုံးသူ တယောက်မှ မဖတ်ကြ။ မိသားစုဝင်တွေက မေးကြရ ဖတ်ကြရတယ်။ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ စာတွေကိုတော့ ကေတီဗွီကပြန်လာသူတွေက ဖတ်ကြပါတယ်။ ကောက်ချက်ချရမလိုဖြစ်လာတယ်။
အဆုပ်ကင်ဆာထက် အရက်ကပိုဆိုး၏။ KTV ရောဂါတွေထက် အရက်ကပိုဆိုး၏။ No Smile!
• နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ် ကျန်းမာချမ်းသာကြစေသော်ဝ်။
(မုံရွာက ကိုစိန်ဝင်း စေ့ဆော်လို့ရေးဖြစ်ပါတယ်။)
• ငါတတ်တဲ့ ဆေးပညာ၊ သလေးစပါးလောက်သာ ရှိပါတကား။
• ငါသင်ထားတဲ့ အသိပညာ၊ နှမ်းစိပမာသာ ရှိပါတကား။
• ငါလုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ရွေးစေ့ထက်တောင် သေးပါတကား။
• ငါ့ဝိတ်ကို ရွေးစေ့နဲ့ချိန်ကြည့်၊
Dede Dede နွားထီး မဟုတ်ဘူးလားဆရာ
Tint Swe နွားမလို့ ရေးထားလို့လား။
Dede Dede မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ သမီးတို့ငယ်က ဆရာမက cow နွားမ ox နွားထီးလို့သင်လာခဲ့လို့ပါ။ ခု ဆရာပြောတော့ တခုပိုသိရပါပြီ ကျေးဇူးပါရှင့်။
Ox = အိမ်သုံး Bovine ဘိုဗိုင်းအုပ်စုတိရစ္ဆာန်။ နို့နှင့် အသားအတွက်သုံးနိုင်။ Cow သို့မဟုတ် Bull ဖြစ်သည်။ ခိုင်းနွားအဖြစ်သုံးနိုင်။ တချို့ကိုသင်းသတ်ထားသည်။
Cow = အရွယ်ရောက် နွားမ။ Ox နှင့်အနွယ်တူသည်။ နို့နှင့် အသားအတွက်သုံးနိုင်။ ဘိုဗိုင်းအုပ်စုတိရစ္ဆာန် အထီး + အမကိုလည်းခေါ်နိုင်သည်။
Calf = နွားကလေး။ အများအားဖြင့် ဘိုဗိုင်းအုပ်စုတိရစ္ဆာန် တနှစ်သား။
Cattle = ချိုနဲ့ ခွါပါတဲ့ အိမ်မွေး၊ နို့နဲ့ အသား၊ ခိုင်းစားလို့လည်းရတဲ့အကောင်တွေကိုခေါ်တယ်။ နွား + ကျွဲ + ယခ် စသည်။
Bovine animals = ဘိုဗိုင်းအုပ်စုတိရစ္ဆာန်များ။ Cow, Ox, Buffalo တို့ကိုစုပြီးခေါ်သည်။
Bovine Tuberculosis ဆိုတာ နွားနို့ကနေကူးစက်တဲ့ တီဘီရောဂါကိုခေါ်တယ်။ Mycobacterium bovis (M. bovis) ပိုးကနေ ကူးစက်တယ်။
Pasteurization ပတ်စခြာရိုက်ဇေးရှင်းနည်းနဲ့ပိုးသေစေပြီးမှသာ သောက်သုံးရတယ်။ နွားနို့ကို အပူချိန် 72 °C (161 °F) အထိ ၁၅ စက္ကန့်ကြာ အပူပေးရတယ်။
ကွယ်လွန်သူ ဦးကိုနီနဲ့ လူချင်းမဆုံးဘူးပါ။ ရေဒီယိုမှာတော့ အတူဆုံဘူးပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကို ဆွေးနွေးကြစဉ်ကပါ။
အဲလိုပဲ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ဖြစ်၊ လူမျိုးစုဖြစ်ဖြစ်၊ မတူသူတွေနဲ့နေခဲ့ရတာ မွေးကတည်းပါ။ နိုင်ငံရေးထဲမှာ ကွဲပြားမှုတွေကို ဘေးချိတ်ပြီး ဦးတည်ချက်တူတဲ့အခါ အတူတွဲလုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ကြိုးပမ်းစဉ်ကလည်း နောက်ခံမတူသူတွေနဲ့ မျက်နှာတူရူထားခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံကြီးပြန်ပြင်နေချိန်မှာလည်း နောက်ခံမတူသူတွေနဲ့ လက်တွဲညီကြဘို့လိုတယ်။
ကိုးကွယ်ရာဘာသာတူသူတွေထဲကရော၊ လူမျိုးစုတူသူတွေထဲကပါ စစ်အဏာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အတူမပါခဲ့သူတွေ ရှိခဲ့တယ်။ တူတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
ISIS ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ထဲမှာ တိုင်းပြည်ပေါင်း ၈၆ ကနေ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ ပါဝင်နေတယ်။ (K ဆိုတာ ထောင်ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။)
ကျူနီးရှား =6–7K
ဆောဒီအာရေးဗီးယား =2–3K
ရုရှား =2–3K
ဂျော်ဒန် =2–3K
တူရကီ =2–3K
ပြင်သစ် = 1 –2K
မောရိုကို = 1 –2K
လက်ဘနွန် =0– 1 K
အီဂျစ် =0– 1 K
ဂျာမဏီ =0– 1 K
အဲဒီနိုင်ငံမျိုးစုံကလူတွေမှာ တူတာတခုရှိတယ်။ မြန်မာပြည်က သတ်ဖြတ်မှုတွေက ဘာကြောင့်လဲ မသိရသေးပါ။ မတူပေမယ့် တူတယ်နဲ့ တူပေမယ့် မတူဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို လာဖမ်းတဲ့ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးကလူတွေနဲ့ ကျွန်တော် လူမျိုးစုရော ကိုးကွယ်ဘာသာပါ တူတယ်ထင်ပါတယ်။
ဆရာခင်ဗျာ Digxoin ကို ကျနော်အမေအတွက် ဆရာဝန်က ညွှန်းပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်နှင့်တစ်ကွ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၊ မည်သို့အသုံးဝင်ပုံတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော်အမေ၏ အသက်မှ ၄၆ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒိုင်ဂေါက်ဇင်ဟာ နှလုံးရောဂါအတွက်ဆေးဖြစ်တယ်။ အပင်တမျိုးကနေထုတ်ယူတယ်။ နှလုံးခုန်တာ အားကောင်းစေမယ်။ စည်းဝါးမှန်ခုန်စေမယ်။ heart failure နှလုံးအလုပ်နိုင်အောင် မလုပ်နိုင်တာအတွက်လည်းပေးတယ်။ atrial fibrillation ခေါ် နှလုံးခုန်မူမမှန်တာအတွက်လည်းပေးတယ်။
မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို အမှန်ရေးတတ်၊ ပြောတတ်အောင် လုပ်ကြဖို့လိုနေပါတယ်။ တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင်သေးရင်တောင်မှ သွက်သွက်ခါအောင် မှားနေတာတွေကို ပြုပြင်နိုင်အောင်နဲ့ ပိုမဆိုးစေအောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ဖေ့စ်ဘွတ်လိုနေရာတွေမှာ ဖုန်းပေါ်ကနေလွယ်သလိုရေးကြတာက သိပ်မဆိုးလှပေမဲ့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာ၊ ဗိုင်းနယ်လ် (ဗီနိုင်း မဟုတ်) ပေါ်မှာရေးတာ၊ ဆိုင်းဘုတ်မှာရေးတာတွေက သိသိသာသာဆိုးလှတယ်။
ကျွန်တော်တို့တတွေ ဒေလီမှာ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် လုပ်ခဲ့ကြတုံးက ပိုစတာ ပလေကပ်တွေမှာ ကြွေးကြော်သံတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးကြရတယ်။ စာလုံးပေါင်းမှားနေရင် သတင်းထောက်တွေက ဓါတ်ပုံရိုက်ယူတတ်တယ်။ မြန်မာလိုဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ တလွဲရေးထားတာတွေ့ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ကြစေချင်ပါတယ်။ အများစုက မှားလို့မှားမှန်မသိ တင်နေကြတယ်။ မှားရေးထားတာကို အပြစ်တင်ဘို့ဆိုတာထက် အမှန်ပြင်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့သာ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဥပမာလေးတွေ ပေးပါရစေ။ အာထွာစောင်း မှားတယ်။ အက်ထွာဆောင်း မှားတယ်။ အာထွာဆောင်း မှန်တယ်။ ကာလာသားချက် မှားတယ်။ ကာလသားချက်၊ ကာလသားရောဂါလို့ ရေးရတယ်။ မွန်းတဲ့နေ မှားတယ်။ မွန်းတည့်နေ ဖြစ်ရမယ်။
မြန်မာစာသင်တန်းတွေ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေ၊ ကွန်ယက်ဖွဲ့ လုပ်တာတွေနဲ့ ဆရာ-ဆရာမတွေကိုပါ မွန်းမံပေးသင့်ပါတယ်။ ရေဒီယို၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေကနေလည်း တတတ်တအား ကူကြစေချင်တယ်။ ဘီဘီစီက အစီအစဉ် ကောင်းပါတယ်။ ခက်တာက အခြေခံကအစမှားနေကြတယ်။ စာပေပျောက်ရင် လူမျိုးပျောက်တယ်တဲ့။ အခုက စာပေအထိမဟုတ်ပါ၊ စာပျောက်တော့မယ်။
အမေရိကန်ဌာနေစကား Klallam ကလာလ်လမ် စကားပြော နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် Hazel Sampson ဟေဇယ်လ် ဆင်မဆွန် ဆိုသူ အမျိုးသမီးကြီး အသက် ၁ဝ၃ နှစ်မှာ ၄-၂-၂ဝ၁၄ နေ့က ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဘာသာစကားပေါင်း ၇ဝဝဝ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီ။ နောက်ထပ်လည်း တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်မှာတွေ ရှိသေးတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက မှန်းဆထားပါတယ်။ အဲသည်အထဲမှာ မြန်မာစာ မပါပါစေနဲ့။
မြန်မာစာကို ကယ်ကြပါ။ ဗမာစာသည်တို့စာ၊ မြန်မာစကားသည်တို့စကားဆောင်ပုဒ်ကို ပြန်ဖေါ်ဘို့တော့ မဟုတ်ပါ။ အဲ့ မမှန်တဲ့သူတွေကနေ ဆရာကြီးလုပ်နေတာတော့ သဘောမတူကြောင်းပါ။
လူ့ပြည်လောက လူ့ဘဝကား၊ အိုရ နာရ သေရဦးမည် မှန်ပေသည်တည့်။
သို့တပြီးကား သင်သေသွားသော်၊ သင်ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့မြေသည် အခြေတိုးမြှင့် ကျန်ကောင်းသင့်၏။
သင်၏မျိုးသား စာစကားလည်း၊ ကြီးပွားတိုမြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏။
သင်ဦးချ၍ အမျှဝေရာ၊ စေတီသာနှင့်၊ သစ္စာအရောင် ဉာဏ်တန်ဆောင်လည်း၊ ပြောင်လျှက်ဝင်းလျှက် ကျန်စေတည်း။ (ဇော်ဂျီ)
အခုပဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ဥပုသ်စောင့်သွားတာတော့ မဟုတ်ပါ။ အာဂန္တုကိုယ်တော်တွေရောက်တုန်း နှုတ်ဆက်ဘို့ပါ။ စကားစမြီပြောကြတာတော့ ကြာခဲ့တယ်။ စကားဝိုင်း နှစ်ဝိုင်းခွဲရသေးတယ်။ ဒါတောင် နက်ဖြန်မနက် အရုဏ်ဆွမ်းကပ်မယ့် ဒါယကာနဲ့ ဒါယိကာမတို့က ထိုင်နားထောင်နေကြလို့။
ကျွန်တော် တစိတ်တပိုင်းသိတဲ့ ကျန်းမာရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ မြန်မာစာ။ ဘာသာရေးကိုတော့ နာယူခဲ့ပါတယ်။ ရေးရတာတို့ အင်တာဗျူးမှာဖြေရတာတို့နဲ့ ထိုင်စကားပြောရတာက တမျိုး။ အသံဖမ်းထားတာလည်းမရှိ၊ ကွန်မင့်လာစရာလည်းမရှိတော့ ပိုလွတ်လပ်တယ်။ အကျိုးရှိတယ်။
နားထောင်ကောင်းအောင် ပြောရတာတွေ၊ ဖတ်တဲ့သူ သဘောကျအောင် ရေးရတာတွေနဲ့ မတူတာမျိုးဟာ ပရိသတ် ရွေးရတယ်။ ပရိသတ်များတိုင်းတော့ အတည့်အမှန်မဖြစ်တတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကလည်း မဲရဘို့မလို၊ ကိုယ်တော်တွေကလည်း ဆွမ်းကွမ်းအတွက် ဟောကြတာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်ကလှူ၊ ဘုန်းကြီးကမွေးမြူထားတဲ့ ညောင်ပင်လေး ရှင်သန်နေပါတယ်။
Hsu Myat ဆရာ မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းနဲ့ ပက်သက်တာလေး မေးချင်ပါတယ်။ card ဆိုတဲ့စကားလုံးက မြန်မာလို ကဒ် လား၊ ကတ် လားဆရာ။ ကတ်ပြားတို့ကတ်ထူတို့က _တ် ဆိုတာသိသော်လည်း၊ _ဒ်က ဘယ်အချိန်မှာသုံးပါသလဲ။ အမှားကြီးလား ဆရာ။
အဲလို တခြားဘာသာစကားလုံးကို မြန်မာလိုပြန်တာမှာ စည်းကမ်းရယ်လို့ မရှိပါ။ ကပ်၊ ကတ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ တချို့က သတ်ပုံစာအုပ်ထောက်ပြကြမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲလိုတရားသေယူတာ မမှန်လို့ယူဆတယ်။ ကဒ်က ပိုမှန်တယ်။ တီ နဲ့ဆုံးတာကို တသတ်၊ ပီ သံနဲ့ဆုံးတာကို ပသတ်၊ ဒီ နဲ့ဆုံးတာကို ဒသတ်။
အီးမေးလို့ရေးတာလည်း သင့်တယ်။ အတိအကျက အီးမေးလ် ဖြစ်တယ်။ အာထွာဆောင်းလို့ရေးတာ လက်ခံတယ်။ အတိအကျဆိုရင် အာလ်ထွာဆောင်းဖြစ်တယ်။ အာထွာစောင်းဆို မှားတယ်။
တိုင်းပြည်၊ လူ၊ မြို့အမည်တွေကို ဘာသာပြန်ရာမှာလည်း ဝိဝါဒကွဲနေတယ်။ ဥပမာ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ကမ္ဘောဒီယား စတာတွေကို အစဉ်အဆက်သုံးနေကြလို့ ပြောရန်မရှိပါ။ တကယ်တန်းပြောရရင် စာလုံးအဆင့်တွေ မလိုအပ်ပါ။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းထဲပါ စာလုံးပေါင်းတချို့ကိုလည်း အခုမသုံးကြတော့ပါ။ ဂျူးလယပ်ဆီဇာ = ဂျူလီယက်ဆီဇာ၊ ဆအူးဒီအာရေဗျ = ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ ဆိုက်ဗီးရီးယား = ဆိုက်ဗေးရီးယား၊ ယန်ဆီမြစ် = ယန်စီမြစ်၊ ရှီကာဂိုး = ချီကာဂို၊ ရှီကာဂို၊ ဗဲလဂျီယမ် = ဗယ်လဂျီယန်၊ ကွန်မျူနစ် = ကွန်မြူနစ်၊ တီဗီရောဂါ = တီဘီရောဂါ စသည်။
ရေဒီယို၊ ကား၊ ကော်ဖီ၊ တယ်လီဖုန်း၊ ဒေါက်တာ စတာတွေကတော့ အများစုက နားရှင်းပြီးဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတုန်းက ဂျီသြမေထရီလို့ရေးခဲ့တာ မှားတယ်ထင်လာတယ်။ ဂျော်မက်ထရီ (ဂျီအိုမက်ထရီ) ဖြစ်သင့်တယ်။ တူရကီ ကို တာရ်ကီ၊ ပေါ်တူကီ ကို ပေါ်တူဂယ်လ် လို့ကပိုသင့်တယ်။ အိုဘားမားကို အိုဗားမားလို့ရေးလည်း မှားတယ် ပြောမရပါ။ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတော့ ဒေါ်နာထရန့်လို့ရေးရင် မှားတယ်။
မနှစ်ကဒီရက်လောက်မှာ သတင်းတခုဖတ်ရတယ်။ သူငယ်တန်းမြန်မာစာ သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာသစ်မှာ ဗျည်း (၃၃) လုံး အစား (၈) လုံး ဖြုတ်ပြီး ဗျည်း (၂၅ ) လုံးဖြင့်သာ သင်ကြားမည့်အစီအစဉ်တဲ့။ အဘိဓာန်မှာ Alphabet = အက္ခရာ၊ ဗျည်းသရအက္ခရာလို့ ဘာသာပြန်တယ်။ ဗျည်း၊ သရ၊ အက္ခရာ၊ မတူကြပါ။
ဘာသာစာတခုတိုင်းမှာ အက္ခရာအရေအတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိတယ်။ မြန်မာစာမှာ ရုရှားနဲ့အတူတူ (၃၃) လုံး ရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ဂျာမန်နဲ့အတူတူ (၂၆) လုံးရှိတယ်။ ဟင်ဒီ (၁၁) လုံးရှိကြတယ်။ တရုပ်စာကို Characters သင်္ကေတစာလို့ခေါ်တယ်။ သုံးထောင်ကျော်ရှိတယ်။ ဂျပန်စာကလည်း နှစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်။ စပိန် (၂၉) လုံးလို့ ဖတ်ရပေမယ့် မနေ့က ကျောင်းမှာ စပိန်စကားပြောကျောင်းသူတွေကိုမေးတော့ (၂၇) လုံးတဲ့ ရေးပြတယ်။
ပညာရေးကို လက်တည့်စမ်းသူတွေလက်ချက်နဲ့ မြန်မာစာ ဒုက္ခိတဖြစ်ရတာ များလှပြီ။
မန္တလေးမှာ ဈေးချိုပျောက်ကွယ်လေမလား။ ဈေးဝယ်ကို ရှော့ပင်လို့ပဲ ပြောကြတော့မှာလား။ ဈေးပေါင်ကျိုးကို အရိုးရောဂါလားမေးကြမယ်။
ဈာပနကို အသုဘလို့မသိ၊ ဈာန်တရားမရ၊ ဈာန်ပျံမကြွ၊ မဇ္ဈိမဒေသ ဘုရားဖူးမသွားကြ၊ မဇ္ဈိမပဋိပဒါတရား ကျင့်ကြံဘို့ မလိုတော့တာလား။
ဃနာနို့ဆွမ်း ဘာမှန်းမသိ၊ သံဃာကို ဘယ်လိုပင့်မလဲ။ ဃရာဝါသအမှုကို တည့်တည့်ရေးကြတော့မှာလား။
ဥက္ကဋ္ဌမရှိ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌမသိ၊ ဋီကာကျော် ဋီကာချဲ့မရ၊ ပါဠိအနိစ္စရောက်သွားရ။ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်ကြီ့း့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တံဆိပ်ခေါင်းတွေထုတ်တာ အစပိုင်းမှာ ဘုရင့်ပုလ္လင်တော်၊ စေတီပုထိုး၊ နန်းတွင်းပဟိုစည်၊ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ပုံတွေ၊ ဗိုင်းငင်၊ ဆင်သစ်ဆွဲ၊ ကောက်စိုက်၊ လယ်ထွန်၊ ခြင်္သေ့ စတဲ့ပုံတွေပါတယ်။
ဂျပန်ခေတ်မှာက လယ်ထွန်နေတဲ့ပုံနဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာတော့ ငှက်မျိုးစုံပုံတွေကို ထုတ်တယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ ကိုလိုနီခေတ်မှာ အင်္ဂလန် ဘုရင်-ဘုရင်မပုံတွေများတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဗခကနေဝင်းနဲ့ စစ်အစိုးရကတော့ လူပုံမထုတ်ပါ။
အရင်အစိုးရသက်တမ်းမကုန်ခင်မှာ တံဆိပ်ခေါင်းသစ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ်မှာ ကျွန်တော့်အမြင် မကောင်းသတင်းနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းများပို့စ်တင်တော့ တယောက်က မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ တံတွေးဆွတ်ရတာပေါ့တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာလေးတခု ရေးလိုက်ပါတယ်။ စုံထောက်ဝတ္ထုတပုဒ် ဖတ်ဖူးတယ်။ တံဆိပ်ခေါင်းကော်မှာ အဆိပ်ထည့်ထားသတဲ့။ သူကပဲ ပြန်ပြောပါတယ်။ မျက်နှာဖက်မှာသာ တံတွေးဆွတ်မှာပါတဲ့။
ကော်သတိထားပါ။ အကပ်အရပ်သမား များလှတယ်။ ခေတ်တိုင်းမှာ အစုတစုရှိတတ်တယ်။
မနှစ်က ဒီရက်တွေမှာ အစိုးရဟောင်းနဲ့ အစိုးရသစ်အကြောင်း အတော်ပြောကောင်းနေကြတယ်။
မြန်မာစကားထဲမှာ လှေအဆင်း မြင်းအတက်လို့ရှိတယ်။ အတက်ကိုတော့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာပြောတတ်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ NLD က မလုပ်ပါလား၊ လုပ်ပြန်ပြီ။ ဘာမှမပြောပါလား၊ ပြောပြန်ပြီ။ (လူနာမည်တွေ မထည့်တော့ပါ။)
မြင်းကမလှုပ် ခုန်ကလှုပ်၊ ယုန်ကမတိုး ပိုက်ကတိုးဆိုတာနဲ့ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူးဆိုတာလည်း မြန်မာစကားအစစ်ပါ။
လူတယောက်ရဲ့လက်မှတ်ဟာ သူ့ရုပ်ပုံဖြစ်တယ်။ (စနက်ပ်ရှော့) ဖြစ်တယ်။ သူ့ (ဆယ်လ်ဖီ) ဖြစ်တယ်။ လက်မှတ်ပုံစံ၊ စာလုံးအကြီးအသေး၊ ထင်ထင်ရှားရှား၊ မထင်မရှား၊ ပြတ်ပြတ်သားသား၊ မှုံဝါးဝါး၊ အကောက် အဖြောင့် စတာတွေကို ကြည့်ပြီး လက်မှတ်ပိုင်ရှင်အကြောင်း မှန်းသိနိုင်တယ်။ အဆုံးမှာ အစက်အပျောက်ချတာ၊ အောက်မှာမျဉ်းဆွဲတာ၊ ဒေါင့်ကျတာ၊ အစဆုံးစာလုံးနဲ့ အဆုံးစာလုံးတွေကိုလည်း ကြည့်ရတယ်။ ရိုးသားမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု၊ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု စတာတွေကလည်း သိနိုင်တယ်။ သူ့အကြောင်းဆိုတာထက် သူကနေ သူများတွေကိုပြလိုတာလို့ပြောရင် ပိုမှန်တယ်။
လက်မှတ်အောက်မှာ မျဉ်းလေးတကြောင်းတည်းဆွဲသူမျိုးက ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်တတ်သူ။ အစဉ်အလာ ယုံကြည်စရာနဲ့ တန်ဘိုးထားမှုတွေကို လိုက်နာသူဖြစ်မယ်။ အဲဒီမျဉ်းက နည်းနည်းကောက်နေရင် သူများတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ဖမ်းစားချင်သူဖြစ်မယ်။ ဇစ်-ဇက်လိုဖြစ်ရင် သူ့အမူအယာ မသေချာတတ်သူဖြစ်မယ်။ ဇစ်-ဇက်ရှည်လေ အဲမသေချာမှု ကဲလေ။ ရှေ့သွားလိုက်နောက်ပြန်လိုက်ဆိုရင် စိတ်ရှုတ်ထွေးမှုရှိသူဖြစ်မယ်။ လှိုင်းလိုတွန့်နေရင် ဟာသသဘောရှိတဲ့သူ။
အမေရိကန်သမတ (ရစ်ချတ်နစ်ဆင်) ဟာ သမိုင်းတင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ၁၉၆၉ ကနေ ၁၉၇၄ အထိ အမေရိကန်သမတ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူ့လက်ထက် ၁၉၇၃ မှာ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ ရန်သူတော်တရုပ်ပြည်ကို ၁၉၇၂ မှာ အလည်သွားခဲ့တယ်။ သူ့လုပ်ရပ်အားလုံးထဲမှာ ပိုပြီးအမှတ်ထင်ထင် ကျန်ရစ်ခဲ့တာကတော့ ဝါးတာဂိတ် အရေးအခင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၇-၆-၁၉၇၂ ခုနှစ်တုံးက ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ရုံးချုပ်ထဲမှာ လူ (၅) ယောက် ခိုးဝင်တဲ့အမှုကနေ စတယ်။ နောက်ဆုံး ၉-၈-၁၉၇၄ နေ့မှာ သမတအဖြစ်ကနေ သက်တမ်း မကုန်သေးဘဲ နှုတ်ထွက်ပေးလိုက်ရတယ်။ ပုံပါ သူ့လက်မှတ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် သူ့မှာစိတ်ဖိအားတွေ ဘယ်လို များများ လာခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဖတ်နိုင်ပါမယ်။ သုတေသနလုပ်သူကတော့ ပြင်းပြင်းလာတယ်၊ ထိုင်းထိုင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဆီကို သားသမီးမရသေးလို့ မေးလာသူတွေ နေ့တိုင်း ၅ ယောက်ကနေ ၁ဝ ယောက်လောက်ရှိတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာ ပိုများလာတာလား၊ အရင်ကထက်နည်းသလား သုတေသနနဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်မှု မရှိသလောက်နည်းလို့ မသိပါ။ သူများတွေဆီမှာ ဘယ်လိုလဲ။
ယူအက်စ်အေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ် ၃ ခုအတွင်း ကလေးမရတဲ့နှုန်းကျဆင်းလာပါသတဲ့။ ၁၉၈၂ ကနေ ၂ဝ၁ဝ အတွင်း အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၄၄ နှစ်အထိ အမျိုးသမီးတွေကို ဆန်းစစ်တာပါ။ အရင်က ၈့၅% ရှိခဲ့ရာကနေ ၆% အထိ ကျဆင်းလာတယ်။ ၂ဝဝ၆ ကနေ ၂ဝ၁ဝ အတွင်း အသက် ၃၅ နှစ်ကနေ ၄၄ နှစ်ကြားအမျိုးသမီးတွေကိုတွက်ချက်ရင် ၄၄% ကနေ ၂၇% အထိကျဆင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနှစ်တွေမှာ စုံတွဲတွေမှာ ၁၁% ကနေ ၁၂% တိုးလာတာ တွေ့ရတယ်။ ၂ဝဝ၂ တုန်းကဆို ၁၅% အထိမြင်ခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးအားလုံးကိုအခြေခံတွက်ရင် ၁၉၈၂ တုန်းက ၈့၎% ကနေ ၂ဝဝ၆-၂ဝ၁ဝ မှာ ၁၁% အထိတိုးတက်လာပါတယ်။
အသက်ရလေး ကလေးရဘို့ အခွင်အလမ်းနည်းလေ။ ၁၅ နှစ်ကနေ ၂၄ နှစ်ကြားမှာ ၁၁% က ကလေးရဘို့ခက်ကြပြီး ၄ဝ-၄၄ နှစ်ကြားဆိုရင် ၄၇% ကလေးရဘို့ခက်တယ်။
ကလေးမရနိုင်သေးသူစုံတွဲတွေမှာ ၃ ပုံ ၁ ပုံက အမျိုးသမီးချို့ယွင်းချက်၊ ၃ ပုံ ၁ ပုံက အမျိုးသားအားနည်းချက်နဲ့ ကျန် ၃ ပုံ ၁ ပုံက အကြောင်းရှာမရပါ။ အသက် ၂၉ နဲ့ ၃၃ နှစ်ကြားအမျိုးသမီးတွေ ပုံမှန်မျိုးပွါးလမ်းစနစ်ရှိနေရင် ၂ဝ ကနေ ၂၅% သားသမီးရဘို့ အခွင့်အလမ်းရှိကြတယ်။ ၆ လတာကြိုးစားရင် တေးအကူမပါပဲ ၆ဝ% ကလေးရမယ်။ ၄၄% သော အမျိုးသမီးတွေက ကလေးရဘို့ ဆရာဝန်ပြကြတယ်။ ၆၅% အောင်မြင်သွားကြတယ်။ အကူအညီယူသူတွေ ၈၅-၉ဝ% ကို ဆေးဖြစ်ဖြစ် ခွဲစိတ်တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးရတယ်။ (IVF) လုပ်ပေးရသူ ၃% ထက်နည်းတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဘာကြောင့် သားသမီးရဘို့ ခက်ခဲကြသလဲ
မှန်းပြောရတာ သိပ်မကောင်းလှပါ။ ဆေးသိပ္ပံ စည်းလွတ်တယ်။ တနေ့က အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တခုက အမျိုးသမီး တယောက်နဲ့ စကားဆုံလို့ မေးဖြစ်တယ်။ သူက မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ထိုင်း-မလေးရှားစတဲ့ အနီးအနားတိုင်းပြည်တွေကို သွားလာ လုပ်ကိုင်နေတာ သိတယ်။ မြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေမှာ စီးပွါးရေးနဲ့ လူမှုရေးအတွက် ဖိစီးမှုတွေများနေလို့ ထင်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော် ထပ်ဖြည့်ချင်တာက -
• ကိုယ်ဝန်တားနည်းအမျိုးမျိုးကို စနစ်တကျမသုံးနိုင်ကြာတာပါမယ်။
• လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေက ဥပမာ အဖြူဆင်းတာလိုမျိုးက မဆိုးဝါးဘူးထင်ရပေမယ့် ရေရှည်မှာ မျိုးပွါးလမ်းမှာ ဖြစ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ လမ်းကျဉ်းတာ ပိတ်တာတွေဖြစ်တယ်။
• အရေးပေါ်တာဆေးအကြောင်း မမေးတဲ့နေ့ဆိုတာ မရှိပါ။ ခဏခဏသုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲ ဆေးသုတေသန နည်းတယ်။
• အသက် ၂၅-၃ဝ အထိ အိမ်ထောင်မပြုသေးရင် သားအိမ်အလုံးဖြစ်ခွင့်ပိုများတယ်။ ရာသီမမှန်သူတွေ ငယ်ငယ်ကြီးကြီး မျိုးဥအိမ်ကို စစ်ဆေးသင့်တယ်။ ရေအိတ်ရှိသူတွေ ခက်တယ်။
• တိုင်းရင်းဆေးတွေကိုလည်း အတော်သောက်ကြတယ်။ နေ့တိုင်းလိုလို ပြောကြတယ်။ အဲတာတွေထဲမှာ ဆေးဝါးဗေဒအရ ဘာတွေပါသလဲ ဆေးသုတေသန မရှိပါ။ ဟော်မုန်းတွေ ပါနေလို့သာ ရာသီဖြစ်စဉ်ကို သက်ရောက်စေတာဖြစ်တယ်။ ဟော်မုန်းဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိနေတယ်။ နေ့တိုင်း ပြောင်းလဲနေတယ်။ ဥပမာ တားဆေးတွေထဲမှာ ဟော်မုန်းပါတယ်။ သဘာဝ ဟော်မုန်းဆိုတာ အစားအသောက်တွေထဲမှာပါတယ်။ အော်ဂဲနစ်အစားအစာမဟုတ်တာတွေထဲမှာ ပါနိုင်တယ်။ တိုင်းရင်းဆေးတွေထဲမှာ ပါနိုင်တယ်။ အဲတော့ ဟော်မုန်းကမောက်ကမဖြစ်စေတယ်။ ဟော်မုန်းဆိုတာ ထိန်းညှိရတာ ခက်တယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် ရှိနေပြီး ကိုယ်ပိုင်ဟော်မုန်း မတူကြပါ။
• ဆေးတခုကို တယောက်မှာ အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် နောက်တယောက် အဆင်ပြေမယ်အာမခံလို့မရပါ။ ကြော်ငြာဆေးတွေက အမျိုးသမီးဆိုပြီးရော အပျို-အအို၊ ကိုယ်ဝန်-ကလေးအမေ၊ အသက်ငယ်-ကြီး အားလုံးအတွက် အကောင်းချည်းသာပြောရောင်းတယ်။ ဝယ်သောက်နေသူတွေ များမှများ။
• မြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေကို သုတေသနလုပ်နိုင်ရင် အလွန်စိတ်ဝင်စားရာကောင်းတဲ့ ကောက်ချက်မှန်တွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။
တနေ့က အိမ်မှာ အင်တာနက်အခက်အခဲကို ညီးတွားသလိုရေးမိလို့ ဆမ်ဆောင် ဂယ်လက်ဇီ တက်ဘလက်တခုကို အဝေးကြီးမှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကနေ အယ်မဇုန် ကတဆင့်ပို့ပေးတာ အခုပဲရတယ်။
နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ကျွန်တော့် အင်တာနက် ဘီလ် တနှစ်စာ ကူညီချင်တဲ့ မြန်မာပြည်ကနေ ဒီတိုင်းပြည် တခြား ပြည်နယ်တခုမှာနေတဲ့ ကျန်းမာရေးမေးခွန်းတောင် မမေးဘူးတဲ့ ဇနီးခင်ပွန်းတို့က ကျွန်တော့်လိပ်စာတောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော့် နိုင်ငံရေးကြောင့် ပြည်ပရောက်သွားတဲ့အခါ တခါမှမမြင်ဘူး မတွေ့ဘူးသူတွေ၊ ခပ်ဝေးဝေးသာနေခဲ့တဲ့ အမျိုးတွေ၊ ခပ်စိမ်းစိမ်းမိတ်ဆွေတွေက ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုအတွက် အကောင်းဆုံး စောင့်ရှောက် ကူညီကြသူတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ထိုမှတပါးလည်း = ထိုမှတစ်ပါးလည်း မဟုတ်။
စော်ဘွားတပါး = စော်ဘွားတစ်ပါး မဟုတ်။
ပေါ်တူဂီသင်္ဘောတစီး = ပေါ်တူဂီသင်္ဘောတစ်စီး မဟုတ်။
အဖွဲ့တခုကို = အဖွဲ့တစ်ခုကို မဟုတ်။
မြန်မာစာသတ်ပုံကို ယူနီဖောင်းဝတ်မပေးခင်က ထုတ်တဲ့စာအုပ်။
မေးခွန်းတွေမှာ ရင်ပတ်တွေအောင့်တယ်၊ ညာဖက်ဗိုက်မှာ၊ ဘယ်ဖက်ခေါင်းမှာ၊ စသဖြင့်ရေးကြတယ်။ လူတိုင်းမှာ ရင်ပတ်တခုတည်း၊ ဗိုက်တခုတည်း၊ ခေါင်းတလုံးတည်းသာရှိကြတယ် မဟုတ်ပါလား။
ဗိုက်နာလို့ မေးရင်တော့ ဗိုက်ဘယ်ဖက်ခြမ်း၊ ဗိုက်ညာဖက်ခြမ်း၊ ဗိုက်အထက်အောက်ဆိုတာ ထည့်မရေးကြပြန်ပါ။
ကျွန်တော်က မေးခွန်းတိကျမှ ဖြေတတ်တယ်။ အမေ့ဖက်က ဦးကြီးတယောက်ရှိတယ်။ ရဲအရာရှိတဦး။ သူ့တပည့်တွေကို ဈေးဝယ်ခိုင်းရင် တိတိကျကျမှာတယ်။ အာလူးအရွယ်အစားကို ကြိုးလေးတချောင်းပေးပြီး ဒီလောက်အရွယ် ဝယ်ခဲ့ခိုင်းတယ်။ သူ့ကို ဗိုလ်ကြိုးတိုင်းလို့ ကွယ်ရာမှာ ခေါ်ကြသတဲ့။ ကျွန်တော်ကွယ်ရာမှာ ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲ မသိ။ Smile!
တချို့ကလည်း နောက်နဲ့ အနောက်၊ ရှေ့နဲ့ အရှေ့ကို မကွဲပြားကြ။ စာတပုဒ် ရေးထားရတယ်။
၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကနေ အရောင်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ပြောင်းသွားလာတယ်။ အစဉ်အလာ အနီရောင်ဆိုတာ လက်ဝဲ (ကွန်မြူနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်) ပဲ သတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်။ အခုတော့ NLD ကို အနီရောင်တဲ့။
မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ သုဓမ္မာနဲ့ ရွှေကျင်ဂိုဏ်း သင်္ကန်းရောင် အနုနဲ့ အရင့် ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။ သင်္ကန်းရောင်ဆိုရင်လည်း ဘုန်းကြီးပဲမှတ်ထားတာ ဒေလီမှာ မကုလားမတွေဝတ်တဲ့ဆာရီရောင်က သင်္ကန်းရောင်နဲ့ ဆင်နေလို့ အတော်အမြင်ကပ်တယ်။
အစိမ်းရောင်က ဂေဟစနစ်။ အခုတော့ မောဟဖြစ်သွားပြီ။ ၂ဝ၁ဝ လွှတ်တော်မှာ တိုက်ပုံအဖြူရောင်လွှမ်းမိုးခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၆ လွှတ်တော်မှာ ပင်နီရောင်ကလွှမ်းမိုးလာတယ်။
အခုတခါ ယူအက်စ်အေမှာ အရောင်ပြောင်းတခုဖြစ်လာပါတယ်။ သမတသစ်က ဂေဟစနစ်ကို ဒေါ်လာလောက် ဂရုမစိုက်တော့ပါ။ အဲတာ လောဘ။ သူ့ကို နာမည်ပေးချင်တယ်။ ကျောက်မီးသွေးရောင်လို့။
ဆရာ ကျွန်မ အသက် ၃၅ နှစ်ပါ။ ကလေးလိုချင်လို့ အမျိုးသားအဝေးကပြန်လာချိန်ကြိုးစားတာ အဆင်မပြေပါ။ HSG စစ်တာ စစ်မရလို့ပဲသိရပါတယ်။ ရှင်းပြပေးပါရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သားအိမ်အဝ အတွင်းပေါက် ပိတ် (သို့) ကျဉ်းနေ။ အဲတာကို အိုဂျီက ဘာလုပ်ပေးမလဲ မသိပါ။
အဲ့လိုဖြစ်ရင် ကုသပြီး ကလေးရနိုင်ပါသလားဆရာ။
ဆရာ ကျွန်မ ကလေးရနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလားရှင့်။
IUI လုပ်ရင်ရော ရနိုင်မလား ဆရာ။
သာအိမ်အဝလမ်းကျဉ်းနေတယ်ဆိုတာ တချို့မှာဖြစ်တယ်။ သားအိမ်ဝ (တချို့က သားအိမ်ခေါင်းလို့ခေါ်ကြတယ်) သားအိမ်လည်ပင်းလို့ပြောတာက ပိုနီးစပ်တယ်။ အပေါက်ရှိတယ်။ အတွင်းဖက်ပေါက်နဲ့ အပြင်ပေါက်လို့ ရှိတယ်။ မေးတဲ့သူမှာ အတွင်းပေါက်ကျဉ်းနေတယ်လို့ထင်တယ်။ တစိတ်တပိုင်းသာကျဉ်းတာဖြစ်တယ်။ တချို့က လုံးလုံး ပိတ်နေတယ်။ သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ သွေးမဆုံးခင်မှာ ပိုးဝင်လို့ အနာကျက်ဖြစ်စဉ်အရ ထူထဲရာကနေ လမ်းကျဉ်းမယ်။ တခါတလေ သွေးဆင်းမယ်။ နာမယ်။ ပိတ်မယ်။
တချို့မှာ မွေးရာပါဖြစ်တယ်။ colposcopy, cone biopsy, oracryosurgery procedure ခေါ် သားအိမ်ဝကို ပစည်းကရိယာတွေသုံးပြီး စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်လည်း ကျဉ်းနိုင်တယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း မကြာခဏပိုးဝင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးဆုံးခြင်း၊ သားအိမ်ဝကင်ဆာနဲ့ ဓါတ်ကင်ရခြင်းတွေကနေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ချဲ့ပေးနည်းလုပ်နိုင်တယ်။ ကလေးမွေးလို့ ကျယ်လာနိုင်တယ်။ အမာရွတ်ကြောင့်ဖြစ်တာကို လေဆာနဲ့ပြုပြင်နိုင်တယ်။ hysteroscopic shaving of the cervical tissue နည်းဆိုတာလည်းရှိတယ်။
အဲလိုဖြစ်သူတွေ Endometriosis ခေါ်သားအိမ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးမရဖြစ်နိုင်တယ်။ Intrauterine insemination (IUI) နည်းနဲ့ in vitro fertilization (IVF) နည်းတွေနဲ့ ကလေးရအောင်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
ဆရာရေ ကျမဂျုိုင်းအမဲကွက်လေးကိစ္စဖြေပေးပါအုံးလားဆရာ။ ကျမအထင်တော့ တနေ့ကျမ ပွဲတခုတက်ရမယ်နေ့မှာ ဝတ်မဲ့ဂါဝန်က ဂျိုင်းပြတ်ဖြစ်နေတော့ မရိုသေ ဂျိုင်းမွေးနှုတ်ဖို့လည်း အချိန်မရအင်္ကျီကလည်းဝတ်ပြီးနေတော့ အလွယ်ပဲ တခါမှမသုံးဖူးတဲ့ အမျိုးသားသုံးတဲ့ အမွေးချွတ်ဆေးသုံးပြီး ချွတ်မိပါတယ်။ ပြီးရင် ရေဆေးချရမယ်လို့ ပါတာကိုမဖတ်မိပဲ ရေဆွတ်ထားတဲ့ အဝတ်နဲ့ပဲ သုံးလေးကြိမ် သုတ်ပြီးသွားလိုက်တာ ခပ်စပ်စပ်ကျန်ပေမဲ့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါ။ နောက်တလ ကြာမှသာ အမဲကွက်ပေါ်လာပြီး နောက်ထပ် အမဲကွက်လေးများထပ်ပေါ်လာတယ်ဆရာ။ ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း ထောပတ်သီး၊ တစောင်းလက်ပါတ်နဲ့ပွတ်ပါတယ်။ ချွေးနံ့မနံအောင်လိမ်းရသောဆေးများ အားလုံးလည်း ဖြတ်ထားပါတယ်ဆရာ။ ဆရာဝန်ဆီထိတော့မသွားဖြစ်သေးပါ။ ခုထိတော့ မယားပါမစပ်ပါ။ ဒီနိင်ငံမှာ ဥတုအေးနေသေးတယ်ဆရာ။ ဒီမှာကဆရာဝန်က နိင်ငံစုံကဆရာဝန်ဆိုတော့ ဘယ်သူကောင်းမှန်းလည်းမသိလိုပါဆရာ။ စုံစမ်းဖို့ကလည်းခက်လို့ပါဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါဆရာ။
၄။ Acanthosis nigricans ရောဂါရှိနေခြင်း
၅။ Hyper-pigmentation ရောဂါရှိနေခြင်း။
1. Potato အာလူးရည်ကို ၁၅-၂ဝ မိနစ်ကြာလိမ်းထားပြီးမှ ရေခပ်နွေးနွေးနဲ့ဆေးပါ။
2. Cucumber သခွါးသီးနဲ့ တနေ့ ၂ ကြိမ်ပွတ်ပေးပါ။ တနည်း အရည်ကို သံပုရာရည်နဲ့ရောလိမ်းပါ။
3. Lemon သံပရာရည် ၁ဝ မိန်စကြာလိမ်းထားပါ။ ဆေးပြစ်ပါ။ တနည်း သကြားနည်းနည်းလေးထည့်လိမ်းပါ။
4. Baking Soda ဆော်ဒါကို ရေနဲ့ဖျော်လိမ်းပါ။
5. Orange Peel လိမ်မော်ခွံအခြောက်ကို အမှုံ့လုပ်ပြီး ဇွန်းအသေး ၂ ဇွန်း + ရေ (နှင်းဆီရေ) ဒါမှမဟုတ် နွားနို့နဲ့ရော လိမ်းပါ။ ၁ဝ-၁၅ မိနစ်ကြာရင် ဆေးပါ။
6. Coconut Oil အုန်းဆီကို ၁ဝ-၁၅ မိန်စကြာလိမ်းပြီး ဆေးပါ။
1. Egg oil ကြက်ဥဆီ၊
2. Moisturize ရေငွေ့ပါဆေး၊
3. Exfoliate သုံးနည်း၊
4. Sugar သကြား၊
5. Pumice stone ကျောက်တုံးသုံးနည်း၊
6. Milk နွားနို့၊
7. Vinegar ဗနီဂါ (ရှာလကာရည်)၊
8. Skip shaving and start waxing ချိုင်းမွေးကိုမနှုတ်ပဲ ဖယောင်းသုံးနည်း (စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။)
9. Skip deodorants ချိုင်းနံ့ပျောက်ဆေးမသုံးတော့ခြင်း။
ဒီမှာ ညကတည်းက နှင်းတွေကျပြန်ပြီ။ နေ့ခင်းမှာ အတော်အေးခဲ့တယ်။ လေကလေးဝှေ့လိုက်ရင် အခံရခက်အောင် အေးတာ။ မနက်ထ ပြူတင်းပေါက်ဖွင့်ကြည့်တော့ အပြင်မှာ ဖွေးနေပြီ။ လေထဲမှာ နှင်းဖတ်တွေဆက်ကျနေတယ်။
မြေးနံပတ်တစ်က အလုပ်ကပေးတဲ့အင်္ကျီနောက်ကျောမှာ ရေးထားသတဲ့။ ဆွေစာလုံးကို ဂုဏ်ယူတယ်လို့ သူ့ပို့စ်မှာ ရေးထာတယ်။ သူက မြန်မာလိုမရေးတတ်ပါ။ ခုတလော သူကသဘောတွေကောင်းနေတယ်။ မနေ့က ကျောင်းကို သူမောင်းပို့တယ်။ ညစာ သူဝယ်လာတဲ့ ဟမ်းဘာဂါစားလိုက်ရတယ်။
ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရတာ သွန်သင်ဆုံးမရတာများလှပြီ။ ပင်ကိုစရိုက်လေးတွေက တမျိုးစီ။ ကောင်းတာလုပ်လုပ် ဘာလုပ်လုပ် ဆွေနာမည်ကပ်ပါနေမယ်။ လူသာသေ နာမည်မသေဆိုတာ အကောင်းအတွက်ရော အဆိုးအတွက်ပါ မှန်တယ်။ မိသားစုတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။
ချုပ်ကြီး = ရှေ့နေချုပ်လာ ဖွဲ့စည်းပုံရေးစမ်း။ သုံးချက်ပဲကွာ။ ငါလုပ်ထားတာတွေကို နောက်ကြောင်းပြန်တရားစွဲမရ။ သူ့ကို သမတလုပ်မရအောင်ကန့်။ အခုရေးတာကို ပြင်မရအောင်လုပ်။ အဲတာတွေကို ညောင်နှစ်ပင်ပို့လိုက်။
သံတော်ဦးတင်သူ = မုန်တိုင်းကြီးလာမယ်တဲ့။
ချုပ်ကြီး = ငါ့အိမ်မပါရင် ထားလိုက်။ လုပ်စရာတွေရှိတယ်။
သံတော်ဦးတင်သူ =နာဂစ်မှာ လူတွေအတော်သေနေပြီ။ နိုင်ငံတကာက ကူညီချင်နေပါတယ်။
ချုပ်ကြီး = ဘယ်သူ့မှလက်မခံနဲ့။ အမေရိကန်ကို အနားမကပ်စေနဲ့။
သံတော်ဦးတင်သူ = တရုပ်မုန်တိုင်းမှာ သမတကိုယ်တိုင်သွားကူတယ်။ အမေရိကန်ကူတာလည်း လက်ခံတယ်။ အိန္ဒိယကလည်းကူချင်သတဲ့။
ချုပ်ကြီး = အမေရိကန်လည်း နည်းနည်းကူပါစေ။ အိန္ဒိယက စစ်ယူနီဖေါင်းဝတ်ဆရာဝန်သာလာပါစေ။ ငါ ဧရာဝတီ သွားမယ်။ လူတွေကို ငါ့ကိုရှိခိုးခိုင်း။ ဆန္ဒခံယူပွဲသာ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြ။
သတင်းတခု = ၁ဝ-၅-၂ဝဝ၈ နေ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပ။ မဲပေးသူပေါင်း ၂၄,၇၆၄,၁၂၄ ဦး၊ ထောက်ခံမဲပေးသူ = ၉၃့၈၂%။
ချုပ်ကြီး = မင်းက သမတလုပ်။ မင်းတို့က လွှတ်တော်ကိုအုပ်။ မင်းကပါတီမှာနေ။ မင်းကော်မရှင်။ မင်းကို တပ်ချုပ် ထားမယ်။ ဟာ မင့်ကို မကြိုက်တော့ဘူး ဂျောင်း။ ဟိုနောက်တယောက်လုပ်။ လိုအပ်ရင် ၅ နှစ်ပြန်ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ထုတ်ထား။ အေး ငါနားအုံးမယ်။
ကွန်မင့်တခု = မဲဆန္ဒရှင် 22,496,660 ဦး၊ ထောက်ခံမဲပေးသူ 20,786,596 ဦး၊ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ 22,708,434 ဦး၊ ထောက်ခံသည့် ရာခိုင်နှုန်း 92.48 ရာနှုန်းလို့တွေ့မိတယ်ဆရာ။